13 unburned ဝတ်စုံပေးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်မသူ့ကိုနီကိုလိုင် Baskov,!
ဒါဟာဒေသခံအနုပညာရှင်တွေပရိသတ်ကိုကောင်းတစ်ဦးအသံနဲ့ hits အံ့သြဖို့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့ပုံနှင့်ယနေ့သူတို့ ပို. ပို. sequins, အမွေးနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ထက်ပိုစတုရန်းမီတာလျှင်တဦးတည်းမှယှဉ်ပြိုင်ကြသည်!
လျှင်မကြာသေးမီကယုံကြည်မှုနှင့်အတူချန်ပီယံခဲ "အဓမ္မဘုရင်က" နှင့်ဖိလိပ္ပုသည် "တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း၏ရှင်ဘုရင်" Sergei Zverev အတွက်ယခုကျွန်တော်လုံခြုံစွာထိုသူအပေါင်းတို့သည်အဓိကကသဘာဝဆံပင်ရွှေရောင်ရုရှားနိုင်ငံတဝိုက်လမ်းလျှောက်သည်ဟုဆိုနိုင်သောသည်အထိ - နီကိုလိုင် Baskov! ကောင်းပြီကျနော်တို့သင်ရုံရယ် ... အျောဟစျင့်ကိုမြင်လျှင်, သူ့အများဆုံးသာမန်ထက်ဖျော်ဖြေပွဲဝတ်စုံ၏ 13 ကောက်ယူပွီ!
"ရွှေဓာတ်စက် 2015" ပေါ်တွင်တော်ဝင်သင်္ကန်းအတွက် 1. နီကိုလိုင် Baskov
ချစ်ရသူတစ်ဦး၏ 2. ဝတ်စုံကိုယ်စား
စိတ်ပညာရှင်အသက်တာ၌အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုသာ Self-ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူစတင်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ တကယ်တော့မင်းသားနှလုံးမှဒီအကြံပေးချက်ကို ယူ. အစွမ်းကုန်တာဝန်နှင့်အတူဖျော်ဖြေဖို့သူ့ကိုတဟုန်တည်းပြေး!
ဒါဟာသော 2017th နှစ်တွင်ရွှေဓာတ်စက်များ၏အခမ်းအနားတွင်စောင့်ဆိုင်း၏ "သဘာဝဆံပင်ရွှေရောင်" ပင်ပန်း, အခါသူ၏သရဖူကိုပုံရသည်, ထိုသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရိပ်အမြွက်နားမလည်သောသူတို့အဘို့သူလည်းသီဆိုနေတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း၏ - "ဘုရင်က"!
4. ကဲန် Doll ပိုကောင်းသလိုမဖြစ်နိုင်!
ပထမဦးဆုံးဖြစ်စေရန်, အကောင်းဆုံးနှင့်အလှဆုံး, ကရပျလုံးကိုကျော်နှင့်ပင်အရုပ်တို့တွင်အနေရာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က Nicholas နှင့်ရှိပြီးသီချင်းအမည်ဖြင့်ကတည်းကများနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်လာ!
ကယ်ဆယ်ရေးမှ 5. ထိပ်တန်းသူရဲကောင်း
MisterးX - ကျွန်တော်တစ်ဦးသူရဲကောင်းအခါအမှန်စင်စစ်, အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည် Batman, Superman သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles အချို့ကိုမျိုးလိုအပ်သလဲ?
6. Kohl ရဲ့ "အနီ Sun က"
အဘယ်ကြောင့်အချိန်ဖြုန်းခညျြးနှီးဆှေးနှေးအပေါ်, သင်ရုံဘုရားသခင့မုန်-Ra သကဲ့သို့, နေရောင်၏ပျံရထားအခင်းဖြစ်ပွားရာအရပ်သို့ဆင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်?
မိုဃ်းကောင်းကင် "ရုရှား၏ရွှေအသံ" ထွန်းလင်းနှင့်တံပိုးမှုတ်သောအခါမူလျှင်ကောင်းပြီ, အဘယျကွောငျ့ယခုသူစျေးအကြီးဆုံး seashell ကာကှယျဖို့, ကိုယ်တိုင်ပင်လယ်ရေနက်၏အုပ်စိုးသောမင်းအရာ၌ခန်းထားပြီမဟုတ်လော
သီချင်းပြိုင်ပွဲ "ဟု New Wave ကို" လူအပေါင်းတို့သည်ငါ့တစ်သက်တာတွင်တွေ့မြင်သဖြင့်, အမည်မသိနည်းနည်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ဇာတ်စင်ပေါ်တွင် ... မိမိအသှငျအပွငျ မှလွဲ. ဘာမှအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီဟန်သိရသည်။ တကယ်တော့ရဲ့သောခါးပတ်အောက်ကတကယ်တော့ ပတ်သက်. ခါးပတ်ပြက်လုံးကိုအောက်တွင်ဆင်းမသွားပါစေကုန်အံ့?
9. cardio လုပ်နေတာ
ဟေလသလူဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်, သာနတ်ဘုရားမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ကျွန်တော်တို့ကိုမနာလိုကြကုန်အံ့,
"ငါသည်သဟဇာတဝတ်စုံကိုကျွန်တော်တစ်ဦးအလွန်သဟဇာတဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ပြောပါတယ်ထင်" - အဆိုပါစုံတွဲကိုဂရိမော်ကွန်းစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အဓိကဇာတ်ကောင်ပုံစံအတွက်ရွှေဓာတ်စက်၏တင်ပြချက်အပေါ်အားထငျရှားသညျ့အခါ Nikolai Baskov ရည်းစား Oksana Fedorova ဟာကပြောသည်။ သို့သျောလညျး, စုံတွဲအတွက်အဘယ်သူမျှမယုံကြည်သည်သော်လည်းသီချင်းကို "မတ်ေတာသခငြ့်အရေး" ၏ကြားမှ!
ရသည်မှာ, ရှေးဟောင်းပြည်နယ်နီကိုလိုင် Baskov ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း၏တဦးတည်း၏ဇာတ်လမ်းပျင်းခဲ့, သူသည်အခြားချီ။ နှင့်ပြီးသားရောမဧကရာဇ်၏ပုံစံအတွက်ခွင့်ပြုလာမည့်ဆုအခမ်းအနား "ရွှေဓာတ်စက်" သဘာဝဆံပင်ရွှေရောင်အပေါ်, ကစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, သီချင်း "ဒီလှည့်လည်" ကိုဖမ်းယူသည်သူ၏နန်းတော်ဇိမ်ခံမယားငယ်မရှိ, Rusalka-Volochkova ...
နီကိုလိုင် Baskov - တရုတ်ဧကရာဇ်? ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့သော်လည်း, အံ့သြစရာမရှိပါရှိတယ် ...
13. Catch Pokemon Pikachu!
12 ကယ့်ကို sexy ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်အရာတစ်ခုခုမှားသွားတော်မူသောငါတို့၏ကြယ်ပွ ...
icon တစ်ခု antistyle ဖြစ်လာရန်မည်သို့ 15 အကြံပေးချက်များ
ရူးသွပ်မှုဆက်လက်! စကားမစပ်ဒီဝတ်စုံကို mimimishny Baskov သာပျင်းရိ မှလွဲ. သရော်ဘူး။ တဖန်သင်တို့ကရပ်တန့်မည်အဆိုတော်များ၏ထင်ကြသလော
အသက် 30 creepy စပျစ်သီးကိုဟယ်လိုဝတ်စုံ
ကျားသစ်ရူး, ဒါမှမဟုတ်ရိုင်းပုံနှိပ်ခစျြတဲ့သူ 35 ဖက်ရှင်!
Photogenic အဆင့်ကို "ကြယ်ပွင့်": 8 အလုပ်လုပ်လျှို့ဝှက်ချက်များ peeped!
ဒီဇိုင်နာများအရူးမယ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရာ Fantastic ဖိနပ်,
လူ 15 ၏ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်,a"ကလူနေမှု" အရုပ်ဖြစ်လေပြီတကား
ဤသည်သာ hipsters အတူတက်လာနိုင်ခြင်း: 35 ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
အသက် 30 otpadno ဘောင်: လူတို့သညျအမြိုးသမီးမြားမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးကြသည်မှန်လျှင်,
တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောစမ်းသပ်မှုဓာတ်ပုံဆရာ: အားလုံး - ရှုခင်းဘာမျှမကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်လေး ... ယုံကြည်စိတ်ချ mascara မြှင့်တင်ရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင့်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ပန်းချီကားသည့်အခါ!
သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး "အနီရောင်ကော်ဇော" ပေါ်တွင် 37 ကြယ်များ။ သငျသညျမညျသူမဆိုမသိကြဘူး!
အဆိုပါဖြီးအပေါ်ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့တွင်အင်ဒရူးမှာခန့်မှန်း
Bulimia - လက္ခဏာများ
Nina Dobrev နှင့် Scott Eastwood
သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့သည့်အကြောင်းကိုကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ 14 ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းတွေ,
အီတလီ, Bari က
အဆိုပါငါးမွေးကန်ရေထဲမှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
မီးဖို၌ Bacon - စာရွက်